ISIKHOKELO SABAQALAYO KWINDEBE YERYDER- IRADIO TIMES - IMIDLALO
INdebe yeRyder: Isikhokelo saBaqalayo
Indebe ye-Ryder yinkqubo enzima kakhulu kumntu olala negalufa, nantsi imbonakalo ekhawulezayo yento eyenzekayo.
Umdlalo weNdebe yeRyder, ukunika ukhuphiswano igama elipheleleyo, kukhuphiswano olwenziwa kabini ngonyaka oludlalwe ngaphezulu kweentsuku ezintathu phakathi kwamaqela ali-12 asuka e-US nase-Yurophu, kunye nomphathi ongadlaliyo kunye nenani labasekela-baphathi kwicala ngalinye.
Inkqubo yamabanga emfundo yaseYurophu ibandakanya izintlu ezimbini ezintsonkothileyo, ezigqityiweyo zineziqu ezilishumi ezizenzekelayo, zishiya ukapteni eneepickcard ezimbini. Inkqubo yaseMelika ilula ngokude, inetafile enye yamanqaku apho abaphumeleleyo abasibhozo kunye nokukhethwa kukapteni abane.
Indebe yeRyder idlalwe ngendlela yokudlala yomdlalo, inkqubo yokufaka umngxuma ngomngxuma apho umdlali, okanye iqela, lifumana inqaku ukuba bangangcono amanqaku omchasi wabo kwindawo ethile.
Isandi sinzima? Isenokuba njalo. (Ndiyifanisa nomthetho wecala elingelolakho kwibhola ekhatywayo; kulula ukuyiqonda de kufike ekucaciseni komnye umntu!)
Kumdlalo wokudlala, ukuba uMdlali u-A udlala umngxuma wokuqala kwiifoto ezintathu kwaye uMdlali B uthatha ezine, amanqaku aya kuba yi-1-0 kuMdlali A. Ngaphandle kwegalufa sibhekisa kuyo njenge-1-Up.
Ukuba uMdlali B uphumelela umngxuma wesibini, umdlalo ukwinqanaba kwakhona - okanye iAll Square - kwaye oku kuyaqhubeka de kubekho ophumeleleyo kwimingxunya eli-18.
Oku kuthetha ukuba kunokubakho ophumeleleyo ngaphambi kokuba kudlalwe umjikelo opheleleyo. Ukuba umdlali okanye iqela liyi-2 ukuya phezulu emva kwemingxunya eyi-17, akukho mingxunya yaneleyo yokuba abachasi babo babuye ukuze umdlalo uphele kwaye amanqaku arekhodwe njenge-2 & 1 -thetha u-2-phezulu ngomnye oza kudlala.
Olona phawu lukhulu lokuphumelela kumdlalo wokulinganisa li-10 kunye no-8 - okanye u-10 ukuya phezulu nesibhozo sokudlala. Eli nqaku lamanqaku lenzeke kwimidlalo emibini yeNdebe yeRyder: kanye ngo-1929 kwaye kwakhona ngo-1947.
Ke isebenza njani kwezi ntsuku zintathu? NgoLwesibini nangoMgqibelo, kudlalwa imidlalo emine ye-Foursome kwaye ilandelwa kwangoko yimidlalo emine ye-Fourball.
Ii-Foursomes yenye indlela yokufota. Iqela ngalinye lababini lithatha amanye amashishini kuwo wonke umdlalo, lisebenzisa ibhola efanayo. I-Fourball nayo idlalwe kumaqela amabini, kodwa ngeli xesha igolfer nganye idlala ibhola yabo kwaye amanqaku awona manqaku aphezulu kwiqela ngalinye ayarekhodwa.
Njengokuba kukho imidlalo esibhozo kuphela kusuku ngalunye lweentsuku ezimbini zokuqala, ayizukusebenziswa bonke abadlali abangama-24. Kodwa ngeCawe, bonke bathatha inxaxheba kwimidlalo engafaniyo yabantu abali-12, umzobo owenzelwe ngorhatya lwangoMgqibelo.
Ukulinganisa kulula. Wuphumelele umdlalo wakho kwaye yindawo yeqela lakho; bopha umdlalo kwaye sisiqingatha senqaku nganye. Ukugcina usenza izibalo, amanqaku ali-14 aya kuphumelela iNdebe yeRyder. Ukuba igqiba i-14-14, i-Europe, njengabaphetheyo, iya kuyigcina indebe.
Igalufa.com lelona phephancwadi laseYurophu likhulu ledijithali, elinikezela ngeendaba, izimvo, amanqaku kunye nezixhobo kunye nokuphononongwa kwezifundo, kunye neqonga leengxoxo elinabantu abaninzi kwilizwekazi.
Ibhola ekhatywayo yebhola ekhatywayo kwiTV
Umjelo wezigidi ezi-4 zeponti
Umgca womsebenzi ujohn corbett
Amaxesha okhenketho de yorkshire 2019
ii-hobbs kunye ne-shaw post credits